भोलिदेखि निष्कासन हुँदै लघुवित्तको आईपीओ , कति दिने आवेदन ? |
Home शेयर बजार भोलिदेखि निष्कासन हुँदै लघुवित्तको आईपीओ , कति दिने आवेदन ?
भोलिदेखि निष्कासन हुँदै लघुवित्तको आईपीओ , कति दिने आवेदन ?
क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओलाई डबल बि माइनस रेटिङ दिएको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको देखाँउछ ।
आईपीओ जारि गर्न कम्पनीले २०७८ भदौ १३ मा सेबोनमा निवेदन पेस गरेको थियो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय बाँके जिल्लाको कोहलपुर- ११ मा रहेको छ ।